အိဉ်ဈူဗေတာ:ဗဟိုႏလိတ်မဲ့ငါ - Wikimedia Incubator
အဝ်ႏဝီခီမီဒီယာ အိဉ်ဈူဗေတာယို ကျိုႏဆွုမ်ႏဒျာႏဩ!
ခင်ႏလမ်းယိုကိုနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ ဝီခီမီဒီယာ အိဉ်ဈူဗေတာဒျာႏသွူ။ ယိုကိုနဝ်ꩻ ဝီခီမီဒီယာ ဖောင်ဒေးသိဉ်း ကအွောန်ႏစွꩻဒင်ႏထင်ႏခါꩻ ဝီခီမီဒီယာပရောစဲစ် ပဏာႏမခင်ႏကာ ကထွာဒါႏ ဝီခီပီးဒီးယား၊ ဝီခီလိတ်ဖွူꩻ၊ ဝီခီသꩻတင်ꩻ၊ ဝီခီအာႏကွိုꩻ၊ ဝိစ်သိဥ်နရီ တောမ်ႏ ဝီခီတဖူꩻလွေꩻဖိုင်ႏယို ခွုမ်မာꩻ စီႏစဲဉ်ႏ၊ တဲမ်း၊ စံꩻထွားနွောင်ꩻအီတောမ်ႏ ဘာႏသာႏငဝ်းငွါတသာဖိုင်ႏ ခင်ႏလမ်းဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။
ဝီခီမီဒီယာ အိဉ်ဈူဗေတာကို ကအဝ်ႏဒါႏ ဝီခီအစံꩻဖိုင်ႏနဝ်ꩻ လꩻခါꩻတဝ်းဒွိုန်း နမ်းပဲင်ႏဝီခီဒိုမေင်းလဲ့ တဲမ်းသော့ꩻမွဉ်းဖျင် ထွားဟော်ꩻမုꩻဖိုင်ႏ မာꩻနွောင်ꩻဒျာႏ နုဲင်းပရောစဲစ်ဝီခီအမွေးဖိုင်ႏနဝ်ꩻသွူ။
ဘာႏသာႏငဝ်းငွါတသာ ဝီခီဗာသတီအတာႏ လွေꩻထွားနွောင်ꩻဒျာႏ ဗီတာ ဝီခီဗာသတီထျꩻသွူ၊ ဝီခီရွီးခိုႏတာႏ လွေꩻထွားနွောင်ꩻဒျာႏ ဘာႏသာႏငဝ်းငွါစွုမ်ႏ ဝီခီရွီးခိုႏကိုနဝ်ꩻသွူ။
ယိုကိုနဝ်ꩻ နာꩻအနေႏ အီႏခွုမ်မာꩻစ ပရောစဲစ်တသာ တဗာႏလွုမ်းနဝ်ꩻ လꩻနွောင်ꩻတဝ်းသွူ။ အီႏခွုမ်မာꩻစနွောင်ꩻဒျာႏ ကအဝ်ႏထွူလဲဉ်းဒါႏ ပရောစဲစ် ဘာႏသာႏငဝ်းငွါတသာဗားသိဉ်းလုမ်ꩻသွူ။ မိဉ်ႏမဲဉ်ခွုမ်မာꩻစ ပရောစဲစ်တသာနဝ်ꩻ လွေꩻဒင်ႏကွီနွောင်ꩻဒျာႏ ပရောစဲစ်တသာတာႏ သျောက်လွာႏဖိုင်ႏယိုကိုသွူ၊ မွေးတဝ်းလဲ့ မိဉ်ႏမဲဉ်ဖန်ဆင်ꩻစံꩻ အစံꩻတဗာႏလဲ့ နွို့ထွားနွောင်ꩻဒျာႏ ဝီခီအကဝ်ႏကဲဉ်ကိုသွူ။
ဝီခီမီဒီယာ အိဉ်စျူဗေတာကို ကအဝ်ႏဒါႏ ဝီခီဖိုင်ႏစာႏရင်ꩻ အဗွေအစွုမ်ႏနဝ်ꩻ ထွားနွောင်ꩻဒျာႏ အိဉ်စျူဗေတာ:ဝီခီဖိုင်ႏ ကိုနဝ်ꩻသွူ။
မိဉ်ႏတော် အီႏမာꩻစသွူ ဘာႏသာႏငဝ်းငွါတသာ ပရောစဲစ်တဗာႏနဝ်ꩻ ထွားနွောင်ꩻဒျာႏ သꩻတင်ꩻအချက်လက်ဖိုင်ႏ အကူႏညီႏ:စူခွုမ် ကိုနဝ်ꩻသွူ။ သတိꩻပါသွော့ ဒေႏသကို မူဝါဒ ဖိုင်ႏသြ။
အဝ်ႏလိုႏပါ ရော့ꩻသင်ꩻဒါႏ ဘာႏသာႏငဝ်းငွါကိုဒ် တဗာႏသွူ၊ (သျင်ꩻနယ်ခါꩻ ယီးနယ်စူခွုမ် ကိုသွူ)။ မိဉ်ႏအဝ်ႏတဝ်းလဲ့ ဒင်ႏကွီနွောင်ꩻဒျာႏ မွေးတဝ်းလဲ့ လွေꩻထွားနွောင်ꩻဒျာႏ အိဉ်စျူဗေတာအထဲင်းထျꩻနဝ်ꩻသွူ။
မိဉ်ႏမာꩻစသွူ ဝီခီအစံꩻတဗာႏ ခင်ႏလမ်းယိုကိုနဝ်ꩻ ဆုဲင်ꩻ ဝီခီမီဒီယာ အဝ်ႏလွိုႏကာႏကာႏ အီႏစူꩻလက်ခံႏဖေႏနုဲင်းနဝ်ꩻလဲ့ မွေးတဝ်းသွူ။ နာꩻအနေႏ အဝ်ႏလိုႏလꩻရီးက ဘာႏသာႏငဝ်းငွါကောႏမတီႏ ဖေႏခွင်ꩻချက်နဝ်ꩻသွူ။ အခရာႏစဲင်းအထဲင်းဖိုင်ႏတာႏ ထွားသွော့ ကွီထူႏဘာႏသာႏငဝ်းငွါတသာကိုသြ။
ဆုဲင်ꩻနဝ်ꩻ ခြွောန်းဗူႏလိတ်မဲ့ငါဖိုင်ႏ ဝီခီပရောစဲစ်ထျꩻ ဖေႏကထွာအီအစွဲးအကမ်းတဲင် လွောက်ꩻနာႏအံႏသွင်ꩻဖေႏသွော့ ဘာႏသာႏငဝ်းငွါအစံꩻတာႏ ဖေႏဒါႏအမိဉ်ꩻ သꩻဖော်ဗိုန်ပီချက်ဖိုင်ႏသြ။ နာꩻပရောစဲစ်ထာꩻမာꩻအစံꩻဖိုင်ႏ ကားကအဝ်ႏ (တမ်းပလေက်တောမ်ႏ ကဏ္ဍဖိုင်ႏလဲ့ပါ)ယို ဖေႏကထွာ (ထူႏသုင်ꩻတဗာႏချင်ႏ) တခြောင်ꩻချင်ႏ အဝ်ႏလိုႏနဝ်ꩻသွူ။
အိဉ်စျူဗေတာယို စွဲးကမ်းကိုနွောင်ꩻ ဝီခီအစံꩻတဗာႏနုဲင်းမုဲင်ꩻဟောင်း
နာꩻမိဉ်ႏသေနာႏဒါႏလဲပ် ယိုခါကအဝ်ႏထွူလဲဉ်းဒါႏ ဝီခီအစံꩻတဗာႏ ဘာႏသာႏငဝ်းငွါယိုနဝ်ꩻ ယံစွဲးကမ်းကိုဖေႏပါ ဝီခီအစံꩻနဝ်ꩻတာႏ နီသွောန်းသီး တမာꩻလွေꩻဒျာႏနာꩻသွူသြ။
နာꩻဖန်ဆင်ꩻခါꩻဒါႏ လိတ်မဲ့ငါကားကအဝ်ႏယို သော့ꩻဖေႏပါသွော့ စဲစ်မဲဉ်ႏဒါႏ သွုပ်ငါနဝ်ꩻသြ။ သွုပ်ငါအကျောင်ꩻခရာႏ အစဲင်းအထဲင်းဖိုင်ႏ။
28 October 2021 Lombard Wiktionary, Amis Wikipedia, and Paiwan Wikipedia have been created.
4 August 2021 (from Multilingual Wikisource): Javanese Wikisource have been created
16 March 2021 Mon Wiktionary, Seediq/Taroko Wikipedia and Tayal Wikipedia have been created.
ငဝ်းရီဖိုင်ႏ ကားကအဝ်ႏတာႏ သွုပ်ဝင်ꩻခင်ႏလမ်း
IRC ချန်နယ် #wikimedia-incubator (ဒေါ့ꩻရီအထန်ႏဖဲ့ꩻ)
ဝီခီမီဒီယာ ဖောင်ဒေးသိဉ်းနဝ်ꩻ စီႏမံႏဖန်ဖြယ်ဖေႏဒျာႏ ဘာႏသာႏငဝ်းငွါစွုမ်ႏအလင်တောမ်ႏ အငိုꩻလို့တဝ်း အကျောင်ꩻခရာႏ ပရောစဲစ်ဖိုင်ႏဒျာႏသွူ:
အငိုꩻလို့တဝ်း ကျမ်ꩻပေါင်ꩻစွုမ်ႏ ဝိစ်သိဉ်နရီ
အဘိဓာန်ႏတောမ်ႏ ဝေါဟာရငဝ်းငွါစွုမ်ႏကျမ်ꩻ ဝီခီရွီးခိုႏ
အငိုꩻလို့တဝ်း-အကျောင်ꩻခရာႏ ထွားလိတ်တွိုက် ဝီခီအာႏကွိုꩻချက်
အငိုꩻလို့တဝ်း ကျောင်ꩻသုင်ꩻလိတ်ဖွူꩻတောမ်ႏ စူခွုမ်ဖိုင်ႏ ဝီခီသꩻတင်ꩻ
အငိုꩻလို့တဝ်း အကျောင်ꩻခရာႏသꩻတင်ꩻ ဝီခီဗာစတီ
အငိုꩻလို့တဝ်း လွူꩻထွားတာႏ တခြိုꩻဖိုင်ႏတောမ်ႏ ရုဲင်ꩻတသွိုးမုꩻဖိုင်ႏ ဝီခီတဖူꩻလွေꩻ
အငိုꩻလို့တဝ်း လဲင်းလောင်း ယီးနယ်လွေꩻတဖူꩻနယ်ꩻ
ခွိုꩻဖြယ်ဖိုင်ႏ အိုင်အဝ်ႏရာꩻ ဝီခီဒေတာ
အငိုꩻလို့တဝ်း ထာꩻသေဗဟုသုတအဝ်ႏရာꩻ ဝီခီမီဒီယာ ကောင်မွဉ်း
ဖန်းဖြယ်ဖေႏ မီဒီယာဘဏ်တွိုက် မေတာ-ဝီခီ
ခြွောန်းဗူႏသွုပ်ဆွိုက် ဝီခီမီဒီယာ ပရောစဲစ်ဖိုင်ႏ
Retrieved from "https://incubator.wikimedia.org/w/index.php?title=Incubator:Main_Page/blk&oldid=5314005"